Ra’isul Wasaaraha oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Farmaajo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’isul Wasaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble oo goor dhow warbaahinta kula hadlayey magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa markii ugu horeysay khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay isaga iyo Madaxweynaha xiligiisu dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Rooble ayaa sheegay inuusan jirin wax khilaaf ah oo xiligan u dhexeeya Madaxweynaha, “Doqon meeshii la isku dagaalay ayey ogeyd ee meesha lagu heshiiyay ma oga” ayuu yiri Rooble.
Waxaa uu intaas ku daray in isaga iyo Madaxweynaha ay ka wada shaqeynayaan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho.
“Aniga iyo madaxda kale ee Qaranka waxaa naga wada go’an inaan dalka doorasho ka hirgelinno. Waxaa daaha keenay duruufihii la soo maray, balse doorashadii way noo bilaabatay” ayuu yiri Rooble.
Dhinaca kale, raisul wasaaraha ayaa ka hadlay ujeedada booqashada uu ku joogo dalka Kenya.
“Booqashadeyda Kenya waxay la xiriirtaa hagaajinta xiriirka labada dal ee dariska ah, Kenya uma imaan in aan wax saxiixo, Arrinta badda waa lama tabtaan waxaanna ka sugeynaa go’aankeeda Maxkamadda Caddaaladda Adduunka” ayuu yiri Rooble.
“Ninki la rabo in Islaamninadiisa la xumeeyo waxaa la yiraa waa Murtad, ninkii la rabo in siyaasaddiisa la xumeeyana waxaa la yiraa Badda ayuu saxiixi rabaa, anigu inaan Bad saxiixo uma imaan weligeyna ma saxiixi doono, wixii Ilaahey Maxkamada Hegue naga siiyo ayaana sugeynnaa” ayuu intaas ku daray.